Brisbane indawo enhloko-dolobha yaseQueensland futhi ubusiswa ngomkhulu A-uhlu ezikhangayo efana Sea World, utshani esihle gadi South Bank, neBridge Story, nezinye eziningi - Australia okude kakhulu cantilever kwebhuloho.
Kuphinde kube idolobha okudala, nge art iminyuziyamu kanye zemibukiso futhi amathilomu Chic aplenty, plus kungcono zithuthukisa ephelele Gold Coast amabhishi, ulwandle, futhi igagasi.
Ngezinye 21 angu eside, ke uzoba ukukhonza 18 iziteshi kulo lonke idolobha, futhi izakhamizi futhi izivakashi ngokufanayo uzokwazi hop futhi njengolunye abayithandayo.
Ipswich iseningizimu-ntshonalanga yedolobha laseBrisbane futhi kulapho uzothola khona iWorkshops Rail Museum enhle kakhulu..
Brisbane sezindiza kuyinto ezokuthutha ihabhu matasa lokho ngomfutho amathilomu like Fonzie Abbot, imigoqo efana neTransit Tavern, futhi yokupaka abahlinzeki efana Looking4.com.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu nombhalo bese nje ukusinika credit ne isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-brisbane-train%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)